लोकतन्त्रको रक्षा र दक्षिण ललितपुरको समग्र विकासलाई प्राथमिकता « News of Nepal
उम्मेदवार, ललितपुर क्षेत्र नं. १
हामी ललितपुरलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छौं। यसका लागि पनि सक्षम योग्य राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित हुन आवश्यक रहेको छ। सबै क्षेत्र, वर्ग, लि·, जात, धर्म, सम्प्रदाय, भूगोललाई कार्यक्रममार्फत समटेरे ललितपुर क्षेत्र नं. १ मा नमुनाको रूपमा कार्य गर्ने अभियानमा निरन्तर क्रियाशील छौं। विकासलाई स्मरण गर्दा, २०७० सालमा नेपाली कांगे्रस निर्वाचनमा विजयी भएपश्चात् ललितपुरको विकासका योजनाहरू सम्पन्न गरेका छौं।
अबको पालो लोकतन्त्रको स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि हो। यसका लागि नेपाली कांग्रेस अघि बढिरहेको छ। अब त कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाएर देशमा समृद्धि ल्याउनेछ। यसबाट अत्ताल्लिएका नेपालका कम्युनिस्टहरू एकाएक एकता प्रयासमा लागे। एक–आपसमा नीति, सिद्धान्त, कार्यदिशा र पद्धति नै नमिल्ने एमाले र माआवोदी कन्द्र्रबीचका गठबन्धन लोकतन्त्र र कांग्रेसलाई रोक्न खोज्ने दुस्प्रयास गरेका छन्।
वास्तवमा कम्युनिस्ट एकता हुनु नराम्रो होइन तर गठबन्धनमार्फत जनमत हासिल गरेर संविधान परिवर्तन गरी नेपाललाई कम्युनिस्ट मुलुक बनाउँछौं भनेर लाग्नुचाहिँ प्रजातन्त्रमाथिको कुठाराघात हो। देश र जनताप्रति गम्भीर धोका पनि हो। तसर्थ, आम मतदाता यसमा अत्यन्त सचेत र चनाखो हुनुपर्छ। यो हामीले कदापि हुन दिनुहँुदैन। गहिरिएर विश्लेषण गर्दा, विश्वबाट कम्युनिस्ट पतन तथा लोकतान्त्रिक समाजवादको विश्वव्यापीकरणको आधुनिक युगमा नेपालमा कम्युनिस्टको शासन र सरकार हुनु राम्रो कुरो होइन।
४ वर्ष सांसद रहेर गरेका कामले गर्दा आसन्न निर्वाचनमा मेरो जित सुनिश्चित रहेको छ। ४ वर्षमा मैले गरेका विकासका कामहरू नै मेरो विजयको आधार हो। त्यसलाई निरन्तरता फेरि दिनेछु। विकास र रोजजारी मेरो पहिलो प्राथमिकता भएको छ। चुनावपछि देश आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुनेछ। जनताले चाहेका विकास र रोजगारी प्राथमिकतामा राखेको छु। कृषि उत्पादनतिर पहिलो कदम चालेर घर–घरमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने मेरो योजना रहेको छ। लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विजयीले मात्र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्नेछ। यस क्षेत्रमा मुख्यरूपमा पानी, बाटो, सिँचाइ, कृषिलगायतका क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्ने देखेको छु।
मलाई विश्वास पनि यही छ कि, मैले गरेका कामहरूबारे त्यहाँका बासिन्दा जानकार छन् र ललितपुरको थप विकास र समृद्धिका लागि मतदाताले मलाई फेरि जिम्मेवारी दिनेछन्।